WhatsApp dia manomboka manandrana ny fandikana ireo audio ao amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Manomboka mitsapa ny fandikana raki-peo amin'ny iOS ny WhatsApp
La fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo malaza indrindra dia WhatsApp, tsy misy isalasalana izany. Tao anatin'izay volana vitsivitsy lasa izay dia nahazo vaovao be ny fampiharana, ny sasany amin'izy ireo amin'ny fomba beta, toy ny mety hifandray amin'ny rindrambaiko amin'ny fitaovana hafa nefa tsy mila manana ny telefaona eo akaikiny. Raha ny marina, mbola misy ny fiasa vaovao. Ny fiasa farany andrana ao amin'ny iOS beta dia ny fandikana hafatra am-peo, miaraka amin'ny tanjon'ny fahazoana miditra amin'ny fampahalalana am-peo nefa tsy mila mamerina azy. Ity fampiasa ity dia mbola eo am-piandohan'ny fampandrosoana ary haharitra am-bolana maro vao hanana azy io miaraka amintsika.
Ny fandikana raki-peo ao anaty WhatsApp dia mety ho zava-misy amin'ny ho avy
Nitranga tamintsika rehetra io. Indraindray isika dia tsy afaka mihaino hafatra am-peo izay alefa amintsika satria any amin'ny toerana imasom-bahoaka isika nefa tsy misy écouteur na misy antony hafa. Mety hidika izany fa tsy misy fampahalalana lehibe tadiavin'ny ankolafy hafa ho fantatray. Na izany aza, mandraka ankehitriny dia tsy misy safidy hafa ankoatry ny fihainoana ny audio hahafahana mijery izay voalaza ao.
WhatsApp dia hanana fidirana mivantana amin'ny WhatsApp Pay amin'ny ho avy
Ora vitsy lasa izay, WABetaInfo nanambara fiasa vaovao iray izay andrana WhatsApp amin'ny beta ho an'ny iOS. Momba ny fandikana hafatra am-peo ao anaty ilay fampiharana mihitsy. Tsotra be ilay fandidiana. Ny fampiharana dia hampita ny hafatra am-peo amin'ny alàlan'ny rafitra iray afaka mihaino sy mandika ny hafatra. Noho ny hafatra nalefa tamin'ny iOS dia fantatra fa hampiasaina ny kitapom-paosin'i Apple, na dia manana rafitra mahay mandika hafatra aza ny Facebook androany.
Ho valin'ny 9to5mac, WhatsApp dia namoaka fanambarana milaza fa io fampiasa io dia mbola eo am-piandohan'ny fampandrosoana ary mila fotoana ny fahitana ilay endrika. Ankoatr'izay, amin'ny fotoana hanombohany dia miantoka izy ireo fa hilamina:
Eo am-piandohan'ny famolavolana sy fandefasana mailaka am-peo prototyping isika. Lavitra lavitra amin'ny fahafahantsika manolotra an'ity endri-javatra ity isika, saingy raha ampiharintsika izany dia ho voaro amin'ny alàlan'ny énkripsi end-to-end.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Manomboka mitsapa ny fandikana raki-peo amin'ny iOS ny WhatsApp
Shazam dia nahafantatra hira iray tapitrisa mahery avy amin'ny Center Control
Apple hanao hetsika hafa amin'ny volana oktobra miaraka amin'ny iPad sy MacBook